बालबालिकाले असल सङ्गत कसरी थाहा पाउने? - Mahendranagar Post
Home अन्य समाज बालबालिकाले असल सङ्गत कसरी थाहा पाउने?
टीकापुर- जीवनमा धेरै मानिससँग भेटघाट र नजिक भइन्छ । भेटे जतिका सबै मानिस, साथीभाइ र आफन्त विश्वासिला हुँदैनन्। साथीभाइ धेरै हुन्छन् तर जसले आफ्ना भित्री मनका कुरा बुझ्न सक्छ र दुःखसुखमा साथ दिन्छ उही नै असल साथी हुने टीकापुरका विष्णु पाण्डे बताउ छन। “साथीहरु धेरै हुन्छन्, हामीलाई कुन असल छ भन्ने थाहा हुँदैन”, पाण्डे भन्छन, “जसले राम्रो कुरा सिकाउँछ, अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्छ त्यस्तो साथीसँग मात्र सङ्गत गर्नुपर्छ।”
परिवारमा पनि आमाबुबा, दाइ दिदीलगायतका धेरै सदस्य हुन्छन्। किशोर प्रायः दाजुभाइसँग नजिक हुन्छन् भने किशोरी दिदीबहिनीसँग नजिक हुन्छन्। परिवारमा जसले आफूलाई माया गर्छ, जसले आफूसँग साथीजस्तै व्यवहार गर्छन् उनैसँग नजिक हुने गरेको टीकापुर–३ की किशोरी अरुणा विक बताउ छन। “यो उमेरमा साथीजस्तै व्यवहार गर्ने आफन्त होस् भन्ने लाग्छ”, अरुणा भन्छन, “कुरा नबुझ्ने परिवारका सदस्यको नजिक जान मन लाग्दैन। अभिभावक पनि साथीजस्तै होस् भन्ने चाहना हुन्छ।”
घरमा किशोरावस्थामा पुगेका आफ्ना बालबालिकालाई सही बाटोमा हिँडाउन र उनीहरुलाई गलत बाटोमा जान नदिन उनीहरुसँग खुलेर कुरा गर्ने, उनीहरुका कुरा गम्भीर भएर सुन्ने काम गर्नुपर्ने अभिभावक जवालसिंह तिरुवाले बताए। “हरेक अभिभावकले छोराछोरीको सङ्गतका बारेमा ध्यान दिने र साथीभाइजस्तो व्यवहार गर्ने हो भने किशोरावस्थाका बालबालिकालाई गलत बाटोमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ”, अभिभावक तिरुवा भन्छन, “अधिकांश आमाबुबाले छोराछोरीलाई त्रासमा राख्ने तथा साना साना गल्तीमा गाली गर्ने गर्दा उनीहरुमा झन गलत धारण आउन सक्छन् ।”
दशदेखि १९ वर्षको उमेरलाई किशोरावस्था भनिन्छ । यो उमेर समूहका व्यक्ति धेरै जिज्ञासु र चञ्चले हुन्छन् । उनीहरू कुनै पनि विषयमा सजिलै निर्णय गर्न सक्दैनन् । “बालबालिका सही मार्गमा हिँडे जीवन सुन्दर र सफल हुन्छ । किशोरावस्थामा बालबालिकालाई सही, गलतको पहिचान नभए जीवन दुःखदायी हुनसक्छ”, टीकापुर नगरपालिकाका मनोसामाजिक परामर्शकर्ता धनराज विकले भने, “किशोरकिशोरीले यो समयमा गलत सही थाह नपाउने हुन्छ, जसलाई पनि विश्वास गर्न सक्छन् । उनीहरुमा विभिन्न मानसिक समस्या देखिन सक्छन् ।”
किशोरकिशोरी गलत सङ्गतजस्ता कारणले गलत बाटोमा लाग्ने जोखिम हुन्छ । उनीहरुलाई गलत कार्यमा लाग्नबाट जोगाउन सबभन्दा बढी सचेत अभिभावक हुनुपर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपाने लागुऔषध सेवन, बलात्कार, चोरीजस्ता अपराधमा समेत बालबालिकाको प्रयोग बढेको बताउ छन। “बालबालिका गलत होस् या सही दुवै काम जिज्ञासु भएर गर्छन्, उनीहरुलाई सही गलतको पहिचान हुँदैन”, न्यौपाने भन्छन, “यस्तो बेला उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानसमेत थाहा हुँदैन । अभिभावक सचेत हुने हो अनि विद्यालयले पनि बालबालिकाको हरेक आनीबानीको निगरानी गर्नुपर्छ । उनीहरुका लागि घरमा पनि बालमैत्री वातावरण भएमा व्यस्त राख्न सकिन्छ ।”
बालबालिकामा विभिन्न थरिका भावना गुम्सिएर रहेका हुन्छन् । ती भावना सही समयमा सही व्यक्तिसँग पोख्न पाइएन वा सही सञ्चार हुन सकिएन भने उनीहरुमा विकराल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने समाजशास्त्री शिवचरण चौधरीले बताए। “मनमै कुरा खेलाउने वा गुम्साएर राख्ने बालबालिका नकारात्मक बाटोमा हिँड्न सक्छन्”, समाजशास्त्री चौधरीले भने, “बालबालिका गलत बाटोमा लागे घर, समाज र देशको विकासमा बाधा पुग्छ । घर संसार सुन्दर बनाउन सन्तान असल हुनुपर्छ, त्यसैले बालबालिकालाई सही सूचना दिने, सही मार्ग देखाउने जिम्मा सबैको हो ।” रासस
Previous articleपीएम कप क्रिकेट: सुदूरपश्चिमको छनोट तालिका सार्वजनिक
Next articleएन्फाद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि ५८ खेलाडी छनोट